Milina fanoratana - Wikipedia
Milina fanoratana amin'ny teny arabo Olivetti Lettera 32
Ny milina fanoratana dia milina afahana manoratra taratasy amin'ny alàlan'ny lohavy voaprinty. Ny endriny dia klavie manana bokotra maromaro manoro ny soratra hoprintiana eo ambon'ny taratasy rehefa tsindriana ilay bokotra.
Ny milina fanoratana dia nampiasaina hatran'ny faran'ny taonjato faha 19 hatramin'ny fisian'ny solosaina sy ny rindrankajy mikasika ny biraotika, matetika ampiasaina ankehitriny.
Ny milina fanoratana no ampiasain'ny mpanoratra rehefa manoratra boky nandritry ny taona maro. Nanomboka tamin'i Mark Twain (mpanoratra ny Fiainana eo amin'ny Mississipi sy Tom Sawyer) tamin'ny taona 1870, ary mitohy amin'ny mpanoratra manerana ny tany amin'izao fotoana izao.
2 Milina fanoratana mekanika
1870 : Ny milina fanoratana voalohany novarotana, « The writing Ball » nataon'i Rasmus Malling-Hansen
Ny milina fanoratana voalohany dia noforonin'ny olom-pirenena anglisy Henry Mill tamin'ny 1714, mba afahan'ny jamba manoratra.
Ny Amerikanina aeveo no tena namorona milina fanoratana : manomboka amin'ny « The Typographer » noforonin'i William Austin Burt nametraka brevet tamin'ny 23 Jolay 1829, ny « The Writing Ball » (Bola fanoratana) tamin'ny 1870 noforonin'i Rasmus Malling Hansen., ny milina fanoratana elektrika voalohany noforonina tamin'ny 1914, ny Bolan' IBM tamin'ny 1961 ary ny Powerbook 145 milina fanoratna voalohany misy efa-joro.
Voasolon'ny klavien'ny solosaina ny milina fanoratana tety aoriana.
Milina fanoratana mekanikaHanova
Ny milina fanoratana voalohany dia milian mekanika, tsy misy solosaina na aratra mandalo. kodia miady mify sy fanoitra, vimiaina fotsiny no miasa. Ny litera iray dia voaprintsy eo ambonina singam-by tenenina hoe lohavy, apetraka eo ambony tahona vy na tahona enjana. Rehefa manindry bokotra iray ny mpampiasa azy dia mikisaka kely any ankavanana na mankany ankavia (arakaraky ny fomba fanoratana : mankany ankavanana ny soratra arabo, ary mankany ankavia ny soratra latina sy ny ankabeazan'ny fomba fanoratana) ny fiankinan'ny taratasy mba ahafahan'ny litera manaraka misoratra tsara any ankavia (soratra arabo) na any ankavanan'ny (soratra latina) soratra voaprinty teo alohany. Mihetsika koa ny riba mba ho voaprintsy tsara ny soratra manaraka.
Ary rehefa tonga any amin'ny faran'ny andalana, ahetsika ny fanoitra ahafahan'ny resaoro miverina ary mampihodina ny rolao makany ambany mba hankany amin'ny andalana manaraka. Mitranga amin'ny milina fanoratana elektrika ny tao novisavisaina teo ambony ; amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra manokana mampihodina ny rolao (mba ahafahana miprinty eo amin'ny andalana manaraka) ary mampiverina ny rolao, ny taratasy ary ny riba any amin'ny tombok'ilay andalana. Ny vondrona taratasy-rolao-riba dia tenenina hoe sariô (avy amin'ny teny frantsay chariot), ary ny bokotra naao io fandehanana any amin'ny andalana manaraka io dia tenenina hoe "fiverenana sariô" na "retour chariot". Iavian'ny fanafohezina RC na CR (Carriage Return), midika ho an'ny mpamorona rindrankajy, fiverenana any amin'ny tomboky ny andalana na fitsambikinana anfalana (Line Feed) ankehitriny.
((fr)) Association nationale des collectionneurs de machines à écrire et à calculer mécaniques (ANCMECA), France
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Typewriter
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Milina_fanoratana&oldid=770209"
Dernière modification le 12 Aogositra 2015, à 10:14
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2015 amin'ny 10:14 ity pejy ity.